RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa bishii October ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey - Hargeele - Wararka Somali State
RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa bishii October ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
(England) 08 Nof 2019. Waxaa lagu dhawaaqay xiddiga ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa bishii October ee horyaalka Premier League.
Xiddiga kooxda Leicester City ee Jamie Vardy ayaa ku guulaystay laacibkii ugu fiicnaa bishii October ee horyaalka Premier League dalka England kaddib markii uu qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigay.
Jamie Vardy ayaa wuxuu ugu dambeyntii kaga guuleystay abaal-marintan xiddigihii kula tartamayay ee kala ahaa İlkay Gündoğan (Man City), Willian (Chelsea) iyo Youri Tielemans (Leicester City).
Weeraryahanka reer England ayaa wuxuu dhaliyay gool kulankii ay 2-1 kaga adkaatay Leicester City kooxda Burnley 19-kii October, ka hor inta uusan seddexleey ka dhalinin Southampton isbuuc kaddib.
Shan ciyaaryahan muhiim ah oo seegay tababarkii ugu dambeeyey Real Madrid, kuwaasoo la filayo inay maqnaadaan kulanka Eibar
RASMI: Tababaraha ku guulestay abaal-marinta macallinka bisha October ee Premier League oo la shaaciyey
Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer oo ka hadlay dhaawaca Marcus Rashford
Dani Ceballos: “Xiddigaha Arsenal waxay lahaayeen astaamaha Covid-19, laakiin lama baarin”